स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था : कम्पनी विश्लेषण ( बुधबार, बैशाख २५, २०७६)
कम्पनीले हाल ५७ जिल्लाका १ सय २८ शाखा तथा उपशाखा कार्यालयबाट २ लाख ३३ हजार ३ सय ७२ विपन्न घरपरिवारमा लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले गत आवको नाफाबाट शेयरधनीलाई ११ दशमलव ८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गरेको छ । त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा रू. २८ करोड ५५ लाख १० हजार खुद नाफा आर्जन गरेको छ । यो गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशत बढी हो ।
गतवर्षको तेस्रो त्रैमासमा कम्पनीले रू. २३ करोड ५९ लाख ५७ हजार खुद नाफा कमाएको थियो । मंगलवारको शेयर कारोबारमा विक्री चापको तुलनामा खरीद चाप बढी छ । सो अवधिमा २ हजार २० कित्ता शेयर खरीद र १ हजार ७४१ कित्ता शेयर विक्री गर्ने माग थियो । यस दिन कम्पनीको १ हजार २६७ कित्ता शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
2019-05-08 - 73 view(s) - abhiyan